အိမ်သုံးဒိန်ခဲကဘယ်လိုအသုံးဝင်သလဲ။ သွားများကိုခိုင်မာစေခြင်းအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်၎င်း၏ကုသမှုဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်နို့ပရိုတင်းဓာတ်သည်အာဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားပြီးတိရိစ္ဆာန်ပရိုတင်းများ၊ အိမ်သုံးဒိန်ခဲ ၃၀၀ ဂရမ်ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
နေ့လည်စာအတွက် zucchini နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးမှမည်သည့်အရာကိုချက်ပြုတ်ရမည်နည်း။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့အသားတွေ၊ ကြက်သွန်နီနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးနူးညံ့တဲ့အထိဖုံးထားပါ။
သူတို့ကသူတို့ကတူညီတဲ့ buckwheat တူညီတဲ့သီးနှံ, နေ့ချင်းညချင်းရေနှင့်အတူသွန်းလောင်းနိုင်နိုင်ပြီးနံနက်ယံ၌ဂျုံယာဂုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်သူလုပ်တာလဲ ဘယ်ရေဖြည့်ရမလဲ။ your သင်သည်သင်၏ဟင်းလျာများတွင်ရေအရသာကိုနှစ်သက်ပါက ...
Funchoza နှင့်ကများအတွက်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား .. စာရွက်ကိုအကြံပေးပါ။ ပင်ပိုမိုလွယ်ကူ: strips တွေထဲမှာ funchose, လတ်ဆတ်တဲ့ငရုတ်ကောင်းနှင့်သခွားသီး, rast နှင့်အတူဖြည့်စွက်။ funchose နှင့်အတူထောပတ်သုပ် (တစ်ကိုယ်ရည်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူ) မုန်လာဥကြက်သားရင်သားတ ဦး တည်းကုန်တယ် 300 ...
အာလူး pancakes ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? အာလူးများကို grater ပေါ်တွင်ပွတ်ပါ၊ ကြက်ဥနှင့်အနည်းငယ်မုန့်ညက်၊ ဆား၊ ပေါင်မုန့်စိမ်းကဲ့သို့ထောပတ်တွင်ကြော်ပါ။ နှစ်ခုကြားမှာဆိုရင် ...
ကြက်သားညစာအတွက်ဘာချက်ပြုတ်ရမလဲ။ ငါ့ခေါင်းကလည်နေပြီ ခြေထောက်တွေကိုအရိုးနဲ့ခွဲပြီးအရေပြားနဲ့အသားတွေကိုအပိုင်းအစငယ်လေးတွေခွဲလိုက်တယ်။
အိမ်လုပ် mayonnaise လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကအရည်ဖြစ်ထွက်လှည့်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အားလုံးအပူချိန်တူနေသင့်တယ်။ တစ်နေရာရာမှာနည်းပညာကျိုးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်စာရွက်မှားနေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာရွက်ကိုဆိုဗီယက်ခေတ်ကတည်းက mayonnaise ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သင်လိုအပ်သောနို့၊ ဂျုံ၊ ကြက်ဥ၊ ဆား၊ ဆိုဒါ၊ ထောပတ်မည်မျှရှိသနည်း။ ငါအရာအားလုံးကိုမျက်စိဖြင့်လုပ်ပါ။ တစ်ကြိမ်မှာကြက်ဥတစ်လုံးစီယူပါ။ ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြည့်ပါ။ ဆိုဒါမထားပါနဲ့၊ ဂရုစိုက်ပါ ...
မုန့်ညက်၊ ရေ၊ သကြားနှင့် EAT အမဲလိုက်သည်။
မုန့်ညက်၊ ရေ၊ သကြားနှင့်အမဲလိုက်စားမှုများရှိသည်။ pancakes ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ပြားချပ်ချပ်ကိတ်မုန့်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်တယ်၊ တဆေးပဲလိုအပ်တယ်။ မုန့်စိမ်းပွားသည်
အရသာရှိတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဖြူကိုဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ။ အိမ်မှာနှင့်ဘီယာဘား၌လိုပဲ။ ငါအရမ်းလိုချင်တယ် ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဖြူ: ကောက်ကောက်ပေါင်မုန့် ၁/၄ ပေါင်၊ ၂ tbsp ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဇွန်း, 1-4 ချပ် ...
မုယောစပါးကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အရသာရှိဖို့ဘယ်လို? Perovovku vari na vode ကို .v gotovuy kashu dobav iogyrt -vas lybimii ။ vkysno i bistro Perlovka သည်လျင်မြန်စွာပြင်ဆင်သောပန်းကန်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ မြန်မြန်…
ငါးခူကိုဘယ်လိုကြော်မလဲ = အလျင်အမြန် ...
ငါးခူကိုဘယ်လိုကြော်မလဲ = မြန်မြန်ဆန်ဆန် ... ငါတို့ငါးဖမ်းတဲ့အစာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထဲထည့်ပြီးမီးဖိုထဲယူသွားပါ။ လက်တစ်ဖောင်းလောက်သာဒယ်အိုးထက်ပိုကောင်းသည်။ အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးပေါင်မုန့် ...
lezon ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒါကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေရှိတယ်။ ဒီအရုပ်လေးဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ပန်းကန်တစ်ခုပါ။ )))))))))) Lieson အားလုံးသောချဉ်ရည်ဟင်းချိုကိုပုလင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Lezon ကိုအောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်သည်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ၀ က်သား၊ အသားပြုတ်၊ အသားကြမ်းတမ်းတဲ့အစားအစာဟင်းကိုပြောပါ၊ ငါ့အတွက် ၀ က်သား၊
300g ကိုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ hake flet? ငါးများသည်ငါးအိုး၊ ဆူဆပ်နှင့်နက်ရှိုင်းသောမုန့်ဖုတ်စာတွင်ပြုတ်သည်။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်ငါးသည်အရည်၌လုံး ၀ နှစ်မြှုပ်သင့်သည်။ ပျှမ်းမျှ…
အဲဒါကိုမဆူစေဘဲ oatmeal ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရမလဲ။ လှိမ့် Oats နှင့်ချက်ပြုတ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြproblemsနာများဝယ်! ဂျုံယာသီးကိုအပြည့်ထည့်ထားတုန်းကကျွန်တော်ဟာသွားတွေပေါ်မှာရေပွက်ပွက်ဆူနေတယ်။ ဆားနဲ့ဆီအချို့။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် ...
kefir နှင့်တဆေးမပါဘဲ pancakes သို့မဟုတ် pancakes ကိုဘယ်လိုလုပ် ??? တဆေးမပါသောနို့ဖြင့် pancakes ပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းနို့ရည် 500ml ကြက်ဥ2pcs သကြား2tbsp ။ ဇွန်းဆား 1/2 Tsp ...
နို့ခေါက်ဆွဲဘယ်လိုချက်ရမလဲ? လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များ - နို့ - ပွက်ပွက်ဆူဆီ၏ 0,5 လီတာ - ထောပတ် ၇၅ ဂရမ် - သကြား ၃၀ ဂရမ် - 75 tbsp ။ ဇွန်းဆား - 30/1 Tsp ။ နည်းလမ်း။
သင်တန်း၏အရသာအလွယ်ကူဆုံး lasagna စာရွက်? ငါသည်ဤစာရွက်နှင့်အညီချက်ပြုတ်ခဲ့သည်။ အရသာအလွန်ကောင်းသည့် https://usoda.ru/blog/retsept-lazani နှင့်ထုတ်ကုန်များ၊ လမ်းတစ်နေရာတည်းတွင်ပင်ဆိတ်ပျော့ဆိတ်ဆိတ် ၂၅၀ ဂရမ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက် lasagna မှာယူခဲ့သည်။
ပီဇာမုန့်စိမ်းအတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ၂ စင်တီမီတာ ၃၀ စင်တီမီတာပီဇာအခြေစိုက်စခန်းများ - ၂ Tsp ခြောက်သွေ့သောတဆေး ၁ Tsp သကြား ၃၅၀ ဂရမ်အဖြူရောင်ဂျုံမှုန့် ၃ tbsp သံလွင်ဆီဆား ...
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,789 စက္ကန့်ကျော် Generate ။